Somaliland.Org » “Kala-xadaynta gobollada waa in loo raaco Distoorka iyo Xuduudihii 1960” Muuse Biixi Cabdi Somaliland.Org
October 26th, 2008 Comments Off Socdaalka Wasiirka Daakhiliga iyo cabashada dadka deegaanka
Xukuumadda oo ciidamo u Dirtay muran xuduudeed la kowsaday diiwaan-gelinta iyo Masuuliyiin dareemo kala duwan ka bixiyay
“Alaabtii way qaateen, gaadhigiina laba xabadood bay ku dhufteen, laakiin…”
Gudd. Komishanka doorashooyinka
“Kala-xadaynta gobollada waa in loo raaco Distoorka iyo Xuduudihii 1960”
Muuse Biixi Cabdi “Waxa jira goobo Boorama ah oo dhalinyaro Rabshad-wadeyaal ahi Dhaxag-tuureen, imikana..” Maxamed Ismaaciil Kaboweyne Hargeysa (Ogaal)- Xukuumadda Somaliland, ayaa shalay ciidan xoogan u dirtay deegaamo ay ku muransan yihiin gobollada Hargeysa iyo Awdal, ka dib markii ay dad cadhaysani is hortaageen inay ka bilaabanto Diiwaangelintu afar goobood oo Komishanka qorshaha ugu jiray. Sida warku sheegay waxay dadkaasi weerarka ay ku qaadeen goobahaa Diiwaangelinta loo asteeyay ku sababeeyeen in aanay ka tirsanayn gobolka Awdal. Taas bedelkeeda waxay sheegeen in deegaan ahaan ay hoos tagaan Gabiley, isla markaana aanay ogolayn in deegaankooda gobol kale la raaciyo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdilaahi Ismaaciil Cali oo uu weheliyo Taliyaha ciidanka Qaranka Nuux Ismaaciil Taani oo ciidankaa horkacaya ayaa gelinkii dambe ee shalay u ambobaxay sida la sheegay deegaamadaas. In kasta oo aanu isku daynay inaanu la xidhiidho masuuliyiintan si wax looga weydiiyo arrintaana noomay suurta-gelin inaanu Khadka Isgaadhsiinta ku helo.
Dareenada laga bixiyay:
Guddoomiyaha Komishanka doorashooyinka qaranka Maxamed Ismaaciil Kaboweyne oo xalay wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay hawsha Diiwaangelinta, ayaa sheegay inay si fiican shalay uga bilaabantay gobolka Awdal, oo ah gobolkii labaad ee laga hirgeliyo. “Laba meelood oo la soo weeraray baa jiray, labadaana arrintoodii waa lagu jiraa oo way dhammaanaysaa, dad wax ku noqday dhimasho iyo dhaawac toona ma jiraan,” ayuu yidhi Guddoomiyuhu. Wuxuuna caddeeyay in sidii qorshuhu ahaa goobahaa aanay ka bilaaban Diiwaangelintu. “Yar yarku alaabtii (qalabkii hawsha lagu fulinayay) way qaateen, laba xabadoodna gaadhigii baa lagu dhuftay. Laakiin, ciidan hubaysan baa yimi, alaabtiina markiiba waa la soo ceshay.” Sidaas ayuu yidhi Guddoomiyaha Komishanku. Maxamed Ismaaciil Kaboweyne waxa uu sheegay in goobahaasi aanay ahayn kuwo cusub oo ay haatan u asteeyeen inay Diiwaangelinta ka hirgeliyaan, balse ay raaceen oo ay ahaayeen goobihii doorashooyinkii hore ka dhaceen. “Waqtigeedii may ahayn haddii xuduud la saxayo, waxayna ahayd in mar hore laga wada hadlo. Doorasho may ahayn ee waa Diiwaangelin, waxaana weeye in qofku cidduu doono ha u codeeyee uu qaato kaadhka Jinsiyada iyo ka codaynta,” ayuu raaciyay Kaboweyne. Guddoomiyaha Komishanka qaranku waxa uu sheegay inay jiraan goobo gudaha magaalada Boorama ah oo ay Dhagax-tuureen wax uu ugu yeedhay rabshad-wadeyaal dhalinyaro ahi. “Waxa jira goobo badan oo magaalada Boorame dhexdeeda ah oo ay dhalinyaro rabsho-wadeyaal ahi goobihii dhag-xiyeen oo ay soo hujuumeen. Laakiin, imika waa la sugay oo amaanku waa wanaagsan yahay,” ayuu yidhi Maxamed Ismaaciil Maxamed.
Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah UCID Injineer Faysal Cali Waraabe, ayaa cambaareeyay weerarkaa lagu baajiyay bilawga hawsha Diiwaangelinta deegaankaa muranka xuduudeed ka taaganyahay. Faysal Cali Waraabe oo isaga oo jooga magaalada Saylac u waramay Telefishanka Horn Cable, waxa uu xukuumadda ku eedeeyay sababta ay waqti hore ay u samayn wayday kala-xadaynta deegaankaas oo muddooyin dhowr ah murankoodu soo noqnoqday. Wuxuuna intaa ku daray, in Diiwaangelintu tahay hawl qaran oo aan loo baahnayn in la carqaladeeyo. Sidoo kale, Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo isaga oo ku sugan magaalada Boorama aanu wax ka waydiinay xeerka Ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo uu horaantii sannadkan ansixiyay Golaha Wakiilladu, waxa uu sheegay in kala-xadaynta degsiimooyinka ay xukuumaddu u xilsaaran tahay. “Waxaan filayaa inay ilaa lix bilood ka hor ahayd markii aanu soo saaray Xeerka gobollda iyo degmooyinka. Waxaanu soo jeediyay oo ku qornayd in sannad gudihii xukuumaddu ku samayso kala-xadaynta gobollada.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro. Wuxuuna intaa ku daray, in Komishanka doorashooyinku u sheegeen in maanta dib loogu celin doono goobihii shalay Diiwaangelintu inay ka bilaabanto loo diiday.
Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi oo shalay u waramay BBC-da isaga oo jooga Boorama, ayaa sheegay in kala-xadaynta Degmooyinka loo raaco sida Distoorku dhigayo, taasoo uu xusay inay tahay in loo eego xuduuddihii 1960-kii. Muj. Muuse Biixi waxa uu ka dalbaday dhinacyada arrintaa ku lug lihi inay xaaladda dejiyaan. Nabad-gelyadana ilaaliyaan. Dhinaca kale, wax-garadka deegaanka Waqooyiga Hargeysa ayaa si weyn uga biyo diiday talaabada ay xukuumadda ciidankaa ku geysay deegaankooda. Isla markaana waxa la sheegay inay cabasho arrintaa ku saabsan u gudbiyeen Madaxweyne Rayaale, kana dalbadeen in dib loo soo celiyo ciidankaas uu wato Wasiirka Daakhiligu, maadaama aanay waqtigan muran-xuduuddeed ka sokow, wax shaqaaqo ahi ka taagnayn halkaas. Sida ay ku doodeen.
Ma cadda in sababta xukuumaddu ciidankaas halkaas ugu dirtay tahay muran-xuduuddeedka ka taagan. Hase yeeshee, waxa uu murankaasi taagnaa sannadihii u dambeeyay,